Creatigon - Testimonals
Here areafew of the nice things people have had to say about us.A sample of happy customer testimonals for our gardens.it's our customers who make the job enjoyable.
WEB SECURITY CLASS REVIEWS
Creatigon က Web security သမားတွေအတွက် ဂျင်းကင်းစင်နယ်မြေပါ။ Computer အခြေခံသိရုံနဲ့လည်း အဆင်ပြေနိုင်ပေမယ့် Web ပိုင်းတွေ(အခြေခံလောက်ဖြစ်ဖြစ်) သိထားမယ်ဆိုရင် သင်ရတာ ပိုပြီးခရီးရောက်မှာပါ။ သင်တန်းချိန် ပုံမှန်ဆက်ရင်တော့ အခြေခံမရှိလည်း ပူစရာမလိုပါဘူး။ ကွီး root ရဲ့ ရိုးသားမှုနဲ့ ဆရာစားမချန်မှု တွေကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။
Web security ပိုင်းကို အမှန်အကန် သင်ပေးတဲ့ သင်တန်းတစ်ခုပါ။ Web နဲ့ ပတ်သင့်လို့ စတင်လုပ်မည့် beginner များအတွက်ကတော့ တက်ကိုတက်သင့်ပါတယ်။ local မှာ စမ်းရုံသာမက real world နဲ့ ချိတ်ဆက် သင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ Theory ကို သေချာနားလည်အောင် သင်ပေးတဲ့ သင်တန်းတစ်ခုပါ။
**စာမေးလို့ ဖြေနိုင်ရင်လည်း မုန့်ကျွေးပါတယ်**
ခုတက်နေတာ တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ် .. ဆရာက စာသင်တာလဲကောင်း သဘောလဲကောင်းတယ်
.. I love it. <3
Web Security ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တကယ်ကောင်းတဲ့ နေရာပါပဲ .. ခေါင်းစဉ် တခုချင်းစီကို Theory ပိုင်းရော Pratical ပိုင်းရော အသေးစိတ် ရှင်းပြတယ် .. ပြီးတော့ အဓိက သင်တာကတော့ Thinking ပိုင်းပေါ့ .. သင်ခန်းစာနဲ့ ဆိုင်တဲ့ lab တွေ challenge တွေကို ဘယ်ဟာဆို ဘယ်လိုလုပ်မယ် ဆိုပြီး ကိုယ်ပိုင် thinking နဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုရအောင် ဖြေခိုင်းတယ် ... ဖြေလို့မရတော့လည်း နောက်ဆုံးကျ သေချာရှင်းပြတယ် .. နားမလည်လိုက်လို့ မသိလိုက်လို့ ပြန်မေးရင်လည်း စိတ်မပျက်ပဲ သေသေချာချာ ပြန်ရှင်းပြတယ် .. သင်ပေးတဲ့ အချိန်မှာလည်း ဆရာလို ညီအစ်ကိုလို ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ သင်ပေးကြတယ် .. အတွေ့အကြုံ တွေကိုလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြန်ပြောပြသေးတယ် ဗျ ... Mdy အတန်းမှာတော့ ... challenge တေ ဖြေခိုင်းပီး ရရင် လဘက်ရည်တိုက်မယ်ဆို ပြောပြီး ကြိုးစားဖြေအောင် ပြောတယ် ဗျ ... ( တခါက ရမ်းသမ်းဖြေသွားတာ မှန်လို့ ဆရာ့ဆီက မုန့်စားလိုက်ရသေး :3 )± Web Security အတွက် ဒီသင်တန်းတက်ပီး လိုက်လို့ အကျိုးမရှိပါဘူးကွာဆိုတဲ့ စကားမျိုး ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အာမခံတယ် ဗျာ .. ကိုယ်တိုင်လည်း လိုက်တော့လုပ်ဦးပေါ ... :3 Web Security လမ်းကို လျှောက်မယ် ဆိုရင်တော့ ... ဒီသင်တန်းကို တက်ဖြစ်အောင် တက်ပါလို့ ညွှန်းချင်ပါတယ် ဗျာ ....
Creatigon တဲ့ ကျွန်တော်အရင်က စိတ်ပဲဝင်စားတာ စာတွေဘာတွေမလုပ်ဖြစ်ဘူး ..... base ctf ပြိုင်ပွဲပြီးသွားတော့မှ သွားအပ်တယ် တကယ်အရမ်းကောင်းပါတယ် .... web security နဲ့ပတ်သက်လာရင် တကယ်မိုက်တယ် .. developing ပိုင်းပါ ဒါကြောင့် ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာပါ ပြောပြပေးတယ် ... မန္တလေးကဆိုတော့ ကိုဘရှိန်းနဲ့တွေ့တယ်.... စာတွေနဲ့တင်မဟုတ်ဘူး စကားတွေပါကြွေအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဆရာ ... သွားတက်ကြည့်ကြပါ ရန်ကုန်ရောမန္တလေးရော.....တကယ်မိုက်ကြောင်း ရဲရဲကြီးအာမခံပါတယ်....
Aung Thet Paing Htut
သင်တန်းက မိုက်တယ်။ စာတွေ အများကြီးဘဲ၊ သင်ခန်းစာသစ်တွေနဲ့ အတွေ့အကြုံအသစ် တွေရတယ်။ ၃လက ခနလေးလိုဘဲ့ မျက်စိပွင့် နားပွင့် ရှိခဲ့ပါတယ်။
Web security နဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် သေချာသင်ပြ ပေးနိုင်တဲ့သင်တန်းပါ။ Theory ရော lab ပါ သေချာလေ့ကျင့် ရတဲ့အတွက် real world မှာလည်း တကယ်ထိရောက်ပြီး effective ဖြစ်ပါတယ်။ Web security ကို စလေ့လာလိုသူတွေ တက်ရောက်သင့်တဲ့ သင်တန်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ပြပေးတဲ့ ဆရာက သဘောကောင်းပြီး စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သေသေချာချာ သင်ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို ပညာတွေမချန်ဘဲ သင်ကြားပေးတဲ့ ဆရာ Min Ko Ko ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အရမ်းကောင်းတဲ့ သင်တန်းတစ်ခုပါ။ Web security ပိုင်းကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ညီကိုတေ အခြေခံကစပြီး သေသေချာချာ သင်ပြပေးတာပါ။ သင်တန်းမှာ ဆရာတပည့် ဆိုတာထက် ညီကိုတေလိုမျိုး family type ပုံစံနဲ့ သင်ပြပေးတယ်။ command တေ code တေ ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံတေကို သေချာရှင်းပြပေးတာပါ။ နားမလည်မချင်း စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကို ရှင်းပြပေးတဲ့ သင်တန်းမျိုးပါ။ lab တွေနဲ့တကွ သေသေချာချာ ရှင်းပြပေးတာပါ။ မှတ်ချက်။ ။ လက်ဖက်ရည်တိုက်မယ်ဆို သတိထား ခုထိတော့ သောက်ဖူးတယ်လို့ မကြားမိသေးဖူး မုန့်တော့စားဖူးတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ အတန်းက ညီလေးတယောက်။
Myo Kyaw Zan
Cyber Security လို့ ဆိုလိုက်ရင် web security ဆိုတာကလဲ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခု အဖြစ်နဲ့ တည်ရှိနေတာပါ .... Creatigon က ဖွင့်တဲ့ သင်တန်းကတော့ website ဖန်တီးရေးဆွဲနေတဲ့ web developer တွေ တက်သင့်ရုံမက security နယ်ပယ်ကို စိတ်ဝင်စားပြီး ဘယ်ကနေ စလုပ်ရမလဲ မသိတဲ့သူတွေပါ တက်သင့်တဲ့ သင်တန်းတစ်ခုပါ ... tool သုံးပုံကို အဓိက ထားမသင်ပဲ အားလုံးကို manual ပိုင်း အဓိကထားပြီး အလွယ်တကူနားလည်နိုင်အောင် သင်ကြားပေးတဲ့အတွက် နောက်ပိုင်း ကိုယ့်ဘာကိုယ်လေ့လာတဲ့အခါမှာ လွယ်ကူစေတဲ့အတွက် ပြည်တွင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့ သင်တန်းကောင်းတစ်ခုလို့ပဲ ညွှန်းပါရစေ ...
Moe Myint Shein
သင်တန်းက တကယ်ကောင်းပါတယ် web developer ပိုင်းကဆိုရင် ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ မဟုတ်လည်း web basic တွေသင်ပေးတာဆိုတော့ ကိစ္စတော့မရှိပါဘူး web developer တွေဆိုပိုပြီး လေ့လာလို့ကောင်းတယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာပါ သင်တန်းက အစ်ကိုက သင်တန်းသားတွေကို လေးလေးစားစား ပြန်သင်ပေးပါတယ်။ ဒီသင်တန်းက သင်တန်းသားတွေ အပေါ်မှာ လေးစားမှုရှိတယ်ဗျ။ တစ်ခုတော့ရှိတယ် ဒီ course အနေနဲ့ဆိုရင် သင်တန်းချိန် ၂ ပတ်လောက်တိုးသင့်တယ်လို့ ထင်တယ်ဗျ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သင်တန်းဆရာတွေကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး သင်တန်းသားတွေကြောင့်ပါ။ သင်တန်းသားထဲမှာ မလိုက်နိုင်တဲ့ သင်တန်းသားတွေကိုပြန်ပြီး အချိန်ပိုခေါ်တဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာ။ စာရှည်သွားလို့ တောင်းပန်ပါတယ် ဗျ..
အရမ်းကောင်းတဲ့ သင်တန်းပါဗျာ။ အခြေခံကနေစပီး စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သေချာ သင်ပေးပါတယ်။ မသိနားမလည်ရင်လဲ သေချာရှင်းပြပီး ကိုယ်ပိုင် lab တေ real world က site တေနဲ့ပါ စမ်းပြတာဗျ အရမ်ကောင်းတယ်။ Cyber Security နဲ့ ပတ်သက်လို့ self study လုပ်ချင်တဲ့သူတေ အခြေခံပိုင်သွားအောင် သင်ပေးတဲ့ သင်တန်းပါ။ အရမ်းကောင်းလွန်းလို့ ပြောရင်တော့ အရှည်ကြီးပဲ ကွကိုယ်သာ သွားတက်ကြည့်ဗျာ။ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းလွန်းလို့ အချိန်ဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းတောင် မသိဘူး။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်နော် တိုက်ခန်းက 8 ထပ်မြောက် မှာနော် ဟဲဟဲ ...။
အရင်က Cyber Security နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများကြီးလိုက်စုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။ နောက် Creatigon မှာ Web Security နဲ့ပတ်သက်ပြီး စတက်တော့ စစခြင်းတော့ နားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ နောက် ဆရာ နားမလည်တဲ့ အပိုင်းတွေကအစ သေးစိတ် သေချာရှင်းပြပေးပါတယ်။ ဆရာတစ်ယောက်လိုထက် ညီအစ်ကိုတွေလို နေပေးတဲ့အတွက် ကြောက်စရာရှက်စရာလည်း မလိုတော့ဘူး။ web security နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် သင်ပေးတဲ့အတွက် beginner များအတွက်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ linux command တွေလည်း သင်ကြားပေးတဲ့အတွက် ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။
Khaing Myel Khant
Creatigon ကို စသိတာ 2015 လောက်က Myanmar Security Forum မှာပါ။ သိသိချင်းတက်တော့ တက်ချင်ပေမယ့် နည်းနည်းတော့ လန့်တာပေါ့။ ဂျင်းများဖြစ်နေ မလားလို့။ အဲ့တာကြောင့် ကျနော်စောင့်ကြည့်ဖြစ်တယ် မှတ်မှတ်ရရ ကိုသင်းဗရှိန်း နဲ့ ကိုမင်းကိုကို တို့ရဲ့ post တွေကို မကြာမကြာ ဖတ်ဖြစ်တယ်။ သူတို့ရေးထားတာတွေက တကယ်အသုံးဝင်တာရယ် အသုံးတည့်တာရယ်နဲ့ ၂ နှစ်လောက် ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက် တက်ပြီးတဲ့သူတွေရဲ့ reviews တွေကလည်း ကောင်းတာနဲ့ 2016 မှာ သင်တန်းကို မန္တလေးမှာ ဖွင့်မလို့ကြားတာနဲ့ တက်ဖို့ပြင်ခဲ့ပေမယ့် မတက်ဖြစ်လိုက်ပါဖူး။ ဒီလိုနဲ့ self-study ပဲ စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ခု 2017 မှာ Creatigon မှာ တက်တဲ့အခါမှာကျတော့ သင်တန်းကာလ ၃ လအတွင်းမှာ ကျနော် နှစ်နှစ်ကျော် self-study လုပ်ခဲ့တာတွေ ထက်ပိုပြီးတော့ အသစ်အသစ်တွေ ရလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကို လုပ်ရင်ကြာမယ့်ဟာတွေကို Creatigon က အစ်ကိုတွေရဲ့ ဦးဆောင်မှု လုပ်တဲ့အခါ ခဏလေးအတွင်း တော်တော်လေးကို ပိုင်နိုင်လာပါတယ်။ နောက်ပြီး Creatigon က ဆရာအစ်ကိုတွေကလည်း ဆရာစားမချန်ပဲ မေးသမျှကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ရှင်းပြပြီး ကျနော်လျောက်မေးလို့ သူတို့မသိရင်လည်း ဝေ့ဝိုက်မနေဘဲ မသိဖူးလို့ အမှန်အတိုင်းပဲ ပြောပါတယ်။ Spoon Feeding လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဖူးပေါ့။ သင်တန်းကလည်း နွေးနွေးထွေးထွေးပါပဲ။ အားလုံးက ညီအစ်ကိုတွေလိုပဲ တစ်ယောက်မသိတာကို တစ်ယောက်က ရှင်းပြပေးနေကြပဲ။ ကျနော်ဆိုအရင်က ဘာသင်တန်းမှ မတက်ဖြစ်ခဲ့ပါဖူး (self-study ပဲသွားတာ ပိုက်ဆံကုန်တယ်လေ)။ Creatigon က ကျနော့ရဲ့ ပထမဆုံး တက်ဖူးတဲ့ သင်တန်းပါ။ တကယ်လည်း ကောင်းလို့တက်တာပါ။ ခင်ဗျားတို့လည်း Cyber Security မှာ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် Creatigon မှာတက်ဖို့ Recomment ပေးပါရစေ။
Cyber Security သင်တန်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သလို Web design နဲ့ security အတွက်လဲ စိတ်အချရဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
Security ကို စိတ်ဝင်စားသူတွေ အတွက်တော့ လုံးဝကို တက်သင့်တဲ့ သင်တန်းပါ။ ဒီမှာက လက်တွေ့ကိုပို ဦးစားပေးသင်ပေးတယ်။ အခြေခံမရှိတဲ့ လူတွေကိုလည်း ဆရာတွေက တကယ်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ နားလည်အောင်သင်ပေးတော့ တော်တော့ကိုအဆင်ပြေပြေ လိုက်လုပ်နိုင်သွားတယ်။ ဆက်စပ်တွေးပုံလေးတွေကိုပါ ပြောပြပေးတော့ ပိုပြီးသဘောကျပါတယ်။ security ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို Creatigon ကို ညွှန်းချင်ပါတယ်။
ကျနော်က ဆယ်တန်းအောင်တာလဲ လပိုင်းပဲရှိပါသေးတယ်။ နောက်တက်မယ့် ညီတွေ ညီမတွေ အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေ ကိုပြောချင်တာကတော့ တက်ဖို့စဉ်းစားပြီး စိတ်ဝင်စားရင် တက်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲမေးရင် အဲ့ကအစ်ကိုတွေက မိသားစုလိုပဲ နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး သင်ကြားပေးတယ်။ မသိတာရှိရင်လဲ သိတဲ့အထိ မေးခိုင်းတယ်။ တခုခုသင်လဲ မသိတာရှိရင် သိသလောက်မေး မတတ်ပဲ သင်လို့ပြီးရင် မကောင်းဘူးလို့ကတော့ အမြဲပြောပါတယ်။ သင်တန်းက အစ်ကိုတွေက responsibility အပြည့်ရှိပါတယ်( တကယ်တတ်ဖို့အတွက်ပဲနော် )။ တခုခုဖြစ်သွားလဲ ငပိကြော်ပို့ဖို့ အသင့်ပါပဲ။ သင်တန်းဆိုပေမယ့်လဲ သင်တာတခုပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ပထမနေ့မှာပဲ ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကိုက်လား သင်တန်းမှာ ဘယ်လိုသင်မှာလဲပြောတယ်။ တက်သင့်လား မသင့်လား ပြင်နိုင်အောင်လို့ပါ။ ပထမနေ့မှာပဲ Do and Don't ကို သင်တန်းနဲ့ ပတ်သင့်ပြီးပြောတယ်။ ကြားချင်ရင်တော့ သင်တန်းလာတက်ကြပါလို့။ အောက်မှာဆက်ရေးဦးမယ် Theory, Lab, Challenge, and Real Apple 1. - Theory နဲ့ သင်တာကိုကြိုက်တယ် step တွေပဲပြတာ မဟုတ်ဘူး။ သင်ပြီဆိုတာနဲ့ သမိုင်းကြောင်းနဲနဲ နဲ့ ဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲပြောတယ် ဘယ်လိုတွေးရမလဲပေါ့။ 2. - တခါလုပ်ပြပြီး သေချာရှင်းပြပြီးတာနဲ့ Lab တွေလုပ်ခိုင်းတယ် ပြီးလို့ မရတဲ့အပိုင်းတွေရှိရင် စဉ်းစားနည်းတွေနဲ့ ပြန်ပြောပြတယ်။ 3. - Lab တွေဖြေပြီးရင်တော့ challenge တွေကို စမ်းခိုင်းတယ်။ Manual vs Tool ၊ Manual ကို ပိုအားပေးတယ်။ Manual က ပိုနားလည်တယ် မေ့မလွယ်ဘူးလို့လဲ ပြောပါတယ်။ ကောင်းတာတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ စဉ်းစားနိုင်တော့ပါဘူး။CTF လဲ လုပ်ပေးသေးတယ်။ ဒီလောက်ပါဘဲဗျာ သင်တန်းမှ အစ်ကိုတွေ အကုန်ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် Creatigon သင်တန်းမတက်ခင်တုန်းက Cyber security နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမှမသိ နားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားရုံသာ ရှိပြီး သေသေချာချာ မလေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါ။ Creatigon သင်တန်း စတက်ဖြစ်တော့ ကိုယ်ကဘာတစ်လုံးမှ မသိဘဲ အဆင်ပြေပါ့မလားဆိုပြီး စိတ်ထင့်နေခဲ့တာ။ တကယ် သင်ခန်းစာတွေကို သင်ရတော့ သင်တန်းဆရာတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Ko Min Ko Ko ၊ Thin Ba Shane တို့က အခြေခံကစပြီး အပင်ပန်းခံ ရှင်းပြပေးခဲ့တော့ ကိုယ် စိုးရိမ်နေတာတွေ ပျောက်သွားပါတယ်။ နားမလည်တာ ရှိရင်လည်း မေးနိုင်သလို သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းကိုလည်း မတတ်မချင်း သင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သင်ခန်းစာတွေ အပြင် သူတို့ကိုယ်တိုင် တွေ့ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲတွေ အတွေ့အကြုံတွေ ကြိုးစားပုံတွေကို အားကျအတုယူဖွယ် ပြောပြပါသေးတယ်။ ကျွန်တော် သင်တန်းမတက်ခင်က ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အရာနဲ့ပတ်သင့်ပြီး ဘယ်က ဘယ်လို စလေ့လာရမှန်း မသိဘဲ ယောက်ခြေက်ဆယ် ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ သင်တန်းစတက်တက်ခြင်းဘဲ သင်တန်းသားတစ်ဦးချင်းအလိုက် ဘာကိုစိတ်ဝင်စားရင် ဘယ်ဟာကိုလေ့လာသင့်တယ် ဆိုတာကိုပါ ဆွေးနွေးပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ဟာ Cybersecurity နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခြေခံကစပြီး သိချင်တယ် လေ့လာချင်တယ် ဆိုရင် Creatigon ကဖွင့်တဲ့ သင်တန်းကို တက်ဖြစ်အောင်တက်ပါလို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။
Cyber Security ပိုင်းကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် လာရောက်လေ့လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ သင်ကြားမှုအပိုင်းမှာလည်း အသေးစိတ်မသိတာ မရှင်းတာ အားလုံးကိုလည်း ဆရာအစ်ကိုတို့က စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သေချာနားလည်သည်အထိ ရှင်းပြပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီသင်တန်းကို စတက်တုန်းက ကျွန်တော်မှာ အခြေခံ ဘာမှမယ်မယ်ရရ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဆရာအစ်ကိုတို့ရဲ့ သင်ကြားမှု လမ်းညွှန်မှုကြောင့် အခုဆိုတော်တော်ကို Security ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခြေခံကစ သိနားလည် ကလိတတ်နေပါပြီ။ တပည့်တွေ အပေါ်မှာလည်း မိသားစုအရင်းလို ဖော်ဖော်ရွေရွေ နွေးနွေးထွေးထွေးလည်း အပြည့်ရှိပါတယ်။ ကျောင်းသားဟောင်း တစ်ယောက်အနေနဲ့ သင်ဟာ Cyber Securuty ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ #Creatigon သင်တန်းဟာ Prefect ဖြစ်လွန်းတဲ့ သင်တန်းပါလို့ ကျွန်တော်ရဲရဲကြီးကို အာမခံပါတယ်။ We Love <#Creatigon>
သင်တန်းကောင်းလေး တစ်ခုပါ Basic တွေကို သေချာနားလည်ပြီး နောက်တစ်ဆင့်အတွက် လမ်းညွှန်ပြသပေးနိုင်တဲ့ သင်တန်းကောင်းလေးပါ။ ခုတော့ ဘယ်လို စလုပ်သင့်လဲ ဘာလုပ်သင့်သလဲဆိုတာ သိခဲ့ရပါပြီ #review ရေးသွားသည်။
သင်တန်းက အရမ်းမိုက်တယ်ဗျ။ Cyber Security ကို လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်သိသလောက်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကျနော် စတက်တုန်းကတော့ Cyber Security ဆိုတာ ဘာမှန်းတောင် မသိပါဘူး။ စတက်တဲ့နေ့မှာ ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ trend တွေကို ရှင်းပြ ဆွေးနွေးပေးတော့ တော်တော်စိတ်ဝင်စားလာတယ်ဗျ။ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆက်တိုက် လေ့လာရတာ ပျင်းဖို့နေနေသာသာ သင်တန်းချိန် ၃ လဆိုတာတောင် နည်းနေသလိုပဲ။ အခုမှစ join ချင်တဲ့ သူတွေကိုတော့ security ကို စိတ်ဝင်စားတယ် ( သူများ site တွေ hack ချင်တယ် ) ကိုယ့်မှာလည်း computer နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခြေခံသဘောတရားလောပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် နားလည်နေရင် တက်ပါ နောင်တမရစေရပါဘူးဗျ။ သင်တန်းသားဟောင်း တစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ ရဲရဲကြီး recommend ပေးပါတယ် ခင်ဗျာ။
Kyi Htoo Aung
Web developing trend ဘက်ကို သွားနေပြီး Web security ဘက်ကိုပါ စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေအတွက် အရမ်းသင့်တော်တဲ့ သင်တန်းတစ်ခုပါ။ Web developer မှမဟုတ်ပါဘူး Security ပိုင်းကို စိတ်ဝင်စားပြီး self-learning စတင်လုပ်ဖို့ အခက်အခဲ ရှိတဲ့သူတွေအတွက် အရမ်း first step လေးတစ်ခုပါ။ အခြေခံမှအစ ကျွမ်းကျင်သည်အထိ Theory ရော Preatical တွေပါ အသေးစိတ် သင်ပေးတာပါ။ Pratical lab တွေလုပ်တဲ့ အခါမှာလည်း online challenges, သင်ကြားပေးတဲ့ အစ်ကိုတွေ ရေးထားတဲ့ lab တွေအပြင် အခြား real world site အသေးလေးတွေနဲ့ပါ လုပ်ရပါတယ်။ ပျော်ဖို့လည်း ကောင်းပါတယ်။ သင်ပြပေးတဲ့ အစ်ကိုတွေကလည်း အရမ်းစိတ်ရှည်ကြပါတယ်။ လက်တွေ့အပြင် Theory ပိုင်းပါ နားလည်သည်အထိ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သင်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် IT Security အထူးသဖြင့် Web security ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူ IT Security field မှာ Self-learning လုပ်ဖို့ အခက်အခဲရှိတဲ့ သူတွေကို Creatigon ကို join ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Nan Hazel Aung Hein
အရမ်းကောင်းတဲ့ သင်တန်းပါ၊ web security ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခြေခံမှစလို့ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်အောင် သင်ပေးပါတယ်။ သင်တန်းပျက်ခဲ့ရင်လဲ ပြန်သင်ပေးပါတယ်။ Security ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ချင်ရင်တော့ Creatigon ကို လာရောက်စေချင်ပါတယ်။
သင်တန်းက Web Security ပါ။ အဲ့ထက်ပိုနေပါတယ် thinking style တွေနားလည်ပါတယ်။ self-study ဘယ်လိုလုပ်ရတယ် သိလာပါလိမ့်မယ်။ community ကောင်းကောင်းတစ်ခု ရပါလိမ့်မယ်။ ဆရာတပည့် မာန်မာနမရှိ မိသားစုလိုပါ။ နောက်ဆုံးသင်တန်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ "ဟျောင့် ဂျင်းကောင် ဆိုတာ " ဒီ သင်တန်းတော့ မပါဖူးဆိုတာ သေချာပါတယ်ဗျာ။ အများကြီးရေးရင် ရှည်နေမယ် အဲ့ထက်ပိုတာ သေချာပါတယ်။
Yi Yi Aung
သင်တန်းက web security ပါ။ သိလာရတဲ့ Knowledge အရ ဒီသင်တန်းက web နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် အဆင်ပြေတဲ့ သင်တန်းတစ်ခုပါ။ web developing ပိုင်းသွားချင်တဲ့ သူဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ security ပိုင်း သီးသန့်သွားချင်တဲ့ သူဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီသင်တန်းက ရလာတဲ့ Knowledge တွေကတော့ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ အသုံးပြုတတ်သလောက် အသုံးဝင်နေပါတယ်။ သင်တန်းက ဆရာတွေကလည်း သေသေချာချာ နားလည်သည်အထိ သင်ကြားပေးပါတယ်။ သင်တန်းပြီးလို့ ရလာတဲ့ Knowledge တို့ Skills တို့ကတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ကြပါဘူး။ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ Background knowledge တို့ စိတ်ဝင်စားမှု၊ ကြိုးစားမှု၊ ဆက်လက်လေ့လာလိုက်စားမှု အပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာတာကတော့ ကြိုးစားရင် ကြိုးစားသလောက် အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိစေပါတယ်။ သင်တန်းက ပေးလိုက်တဲ့ Thinking style ၊ Teaching style ၊ Learning style တွေကတော့ ကိုယ်ဆက်လက်လေ့လာတဲ့ အပိုင်းမှာ အသုံးပြုတတ်သလောက် အကျိုးရှိစေပါတယ်။ ဒီသင်တန်း တက်လိုက်လို့ ရလာတဲ့ Web နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အပိုင်းတွေ ၊ security နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အပိုင်းတွေ လိုက်စားတဲ့ Web နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အပိုင်းတွေ ၊ security နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အပိုင်းတွေ လုပ်ဆောင်ရာမှာ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် တွေကိုပါ သိရှိ နားလည်စေတဲ့အတွက် တက်သင့်တဲ့ သင်တန်းဆိုတာ သေချာပါတယ်။
Security ပိုင်းကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် Creatigon က တက်သင့်တဲ့ သင်တန်းပါ။ အကြိုက်ဆုံးကတော့ computer basic လောက်ပဲသိပြီး တက်မယ်ဆိုရင်တောင် စာသေချာလိုက်လုပ်ရင် ရနိုင်တာကိုပါ။ သင်ပေးတဲ့ဆရာကလည်း စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြပေးတယ်။ သင်တန်းကိုတက်မယ်ဆို စာပြန်လုပ်ဖို့ အချိန်ရှိရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ စာ အမြဲမလုပ်ဖြစ်လို့ မေ့သွားခဲ့ရင်တောင် မေ့သမျှစာတွေကိုလည်း ဆရာကပြန်ပြောပြပေးပါတယ်။ အဲ့တော့ စာမလိုက်နိုင်လို့ ကျန်ခဲ့မှာ မပူရတော့ဘူးပေါ့။ သင်တန်းကြေးနဲ့တန်အောင် security ပိုင်းမှာ ဘာမှမသိခဲ့တာတွေ သိရပါတယ်။ Web security ကို လေ့လာချင်တဲ့ လူငယ်တွေအတွက် Creatigon ကို တက်ကြည့်ပါလို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
Creatigon ကိုစသိတာ ဒီနှစ်မှပါ။ သူငယ်ချင်းက စိတ်ဝင်စားတယ် တက်ရအောင်လို့ လာပြောတော့ ဘာမှန်းတော့မသိဘူး တက်ဖြစ်သွားတယ်။ စစချင်းတော့ ကိုယ်မသိတဲ့ field ဆိုတော့ စိတ်ညစ်ခဲ့တယ်။ နှစ်ပတ်လောက် တက်ပြီးသွားတော့ စိတ်ဝင်စားလာတယ်။ Lab တွေကလည်းတော်တော်ကို စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသလို ပျော်စရာလည်း ကောင်းပါတယ်။ ဆရာတွေကလည်း မသိရင်မေးတဲ့ သိတဲ့အထိ စိတ်ရှည်ရှည်ရှင်းပြပါတယ်၊ သဘောကောင်းပါတယ်။ စိတ်ဝင်တစား လေ့လာမယ်ဆိုရင် သိပ်ကိုကျယ်ပြန့်တဲ့ field ပါ။ ပညာတွေအများကြီးရနိုင်တဲ့ သင်တန်းတစ်ခုပါ။ Security အကြောင်းတွေလည်း သိသွားပါတယ်၊ တစ်ချို့အရာတွေဆို တွေးတောင်မတွေးမိတဲ့ အရာတွေပါ။ အသစ်အသစ်တွေ သိခဲ့ရလို့လည်း တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Creatigon တက်လို့ လုံးဝ အကျိုးမယုတ်စေရပါဘူး။
အမှန်တကယ်ဆို networking ကလွဲပီး ကျွန်တော်ဘာမှမသိသူ တစ်ယောက်ပါ။ လူငယ် သဘာဝ ကျော်ချင် ခွချင်လို့ စုံစမ်းရင်း Creatigon ကို သွားတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အမှန်တကယ် တက်ကြည့်လိုက်မှပဲ Web Security နဲ့ ပတ်သက်တာတွေ သိခဲ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာလဲ ပြိုင်ပွဲတွေအကြောင်း သိခဲ့ရပါတယ်။ လူငယ်တိုင်း Security ပိုင်း လေ့လာချင်တယ် ဆိုရင် Creatigon ကိုပဲ ညွှန်းချင်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ Cratigon ကရခဲ့တဲ့ message တွေနဲ့ ရှေ့ဆက်ဘာလုပ်ခဲ့ရမလဲ သိခဲ့ပြီဗျို့။ ဒါနဲ့ သင်တန်းဆက် Praty အရမ်းလန်းတယ်နော် #AKM
Database and security ကို စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ Cratigon က Cyber security သင်တန်းကို တက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဆရာ တပည့်တွေလိုထက် ညီအစ်ကိုတွေလို လမ်းညွှန်သင်ပြပေးတယ်။ လက်ရှိတတ်ကျမ်းထားတဲ့ ပညာရပ်နဲ့ သင့်တော်မယ်ထင်တဲ့ လေ့လာသင့်တဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေကို ပြောပြပေးတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ပြင်ပဗဟုသုတတွေလဲ သိခွင်ရခဲ့တယ်။ လက်တွေ့လေ့လာနိုင်ဖို့ lab တွေပေးတဲ့အပြင် vulnerable ဖြစ်နေတဲ့ real world က website တွေနဲ့ပါ သင်ကြားပြသပေးတယ်။ အသေးစိတ် လေ့လာချင်တဲ့ သူတွေအတွက်လဲ ကောင်းမွန်တဲ့ စာအုပ်တွေ blog တွေကို ပြောပြပေးတယ်။ Cyber security နယ်ပယ်ထဲကို စတက်ခြေချမယ့် သူတွေအတွက် အရှုံးမရှိတဲ့ တက်ရောက်သင့်တဲ့ သင်တန်းတစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီသင်တန်းကနေ လမ်းညွှန်ပြသမှုတွေ တော်တော်များများ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ Mdy အတန်းကပါ၊ မှတ်မှတ်ရရ သင်တန်းစတက်တဲ့နေ့မှာ ဆရာက ပြောပါတယ် သင်တန်းမှာ သင်တာနားမလည်ရင် မေး တခါ နှစ်ခါ သုံးခါမှ နားမလည်သေးရင် အိမ်ခေါ်ပြီး ရှင်းပြမယ်တဲ့၊ ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့တဲ့ ( ထမင်းပါကျွေးမယ် ဆိုလား )။ သင်တန်းတလျောက် တကယ် တကယ်ကို စိတ်ရှည်ပါတယ်။ Cyber Security အကြောင်းပိုပြီး ထဲထဲဝင်ဝင် သိလာရပါတယ်။ သင်တန်းမှာ အကြိုက်ဆုံးကတော့ Lab တွေပါ။ ဒီ Lab တွေက ဆရာတို့ရဲ့ သိစေချင် တတ်စေချင်တဲ့ စေတနာတွေကို ဖော်ပြနေတာပါ။ Mdy မှာ လာဖွင့်ပေးတဲ့အတွက် ဆရာတို့ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ Creatigon ဆထက်တပိုး အောင်မြင်ပါစေ။
Yan Myo Kyaw
Review တော့မရေးတတ်ဘူး but တကယ်ကောင်းတဲ့ သင်တန်းပါဘဲ။
San Thit Hein
ကျွန်တော်ကတော့ အရင်ထဲက ဒီလောကထဲမှာရှိနေတဲ့ script kiddies တစ်ယောက်ပါ။ အရင်ထဲက အလုပ်ကိစ္စတစ်ချို့နဲ့ ကျောင်းကိစ္စတွေကြောင့် ထဲထဲဝင်ဝင်လဲ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ Creatigon ရဲ့ ရန်ကုန်သင်တန်းဖွင့်ကတည်းက တက်ချင်ခဲ့တာပါ၊ အချိန်မပေးနိုင်လို့ရယ် အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့်ရယ် မတက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အခု မန္တလေးမှာ ဖွင့်တော့လာတက်ဖြစ်တာ အကျိုးကျေးဇူး အများကြီးရခဲ့ပါတယ်။ အဓိကကတော့ " LFI, RFI, XSS, SQL & Server Rooting " ပါပဲဗျာ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုလို သင်တန်းဖွင့်ပေးတဲ့ Creatigon ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လဲ skill တက်လာတယ်လို့ ခံစားရတယ်။
အထူးကျေးဇူးပါ Creatigon Bro....
Aung Win Thant
မင်္ဂလာပါ အရင်က Cyber Security ဆိုတာ online tutorial တွေကနေတစ်ဆင့်သာ လေ့လာခဲ့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို သေချာမသိပါဘူး။ Creatigon ကိုရောက်မှ theory တွေကို နားလည်ခဲ့ရပါတယ်။ Theory တစ်ခုချင်းစီကို pratical နဲ့တစ်ကွ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သည်းခံရှင်းပြပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်လို beginner တစ်ယောက်အတွက် အရမ်းသင့်တော်တဲ့ သင်တန်းတစ်ခုပါ။
Mg Shein Lay
အလုပ်မအားတာက တစ်ကြောင်း၊ အချိန်မရတာက တစ်ကြောင်းနှင့် သင်တန်းပြီးအောင် မတက်လိုက်ရပေမဲ့ တက်လိုက်ရတဲ့ အချိန်ခဏမှာတော့ ပညာတော်တော်များများ ရလိုက်ပါတယ်။ Theory ကော လက်တွေ့ကော သင်ကြားပြသပေးတဲ့အတွက် programming language နားလည်သူများအဖို့ ဘယ်လိုဆက်လေ့လာရမယ်ဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်လွယ်ပါတယ်။ အခြေခံမရှိသူများအတွက်လည်း ခက်ခဲမှုမရှိပဲ သင်တန်းကပေးတဲ့ lab များကို နားလည်အောင် လေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့် အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိရောက်ရှိနိုင်လို့ တကယ်ကောင်းတဲ့ သင်တန်းလေးတစ်ခုပါ။ Creatigon training school ဒီထက်မက အောင်မြင်ပါစေ။
က်ေနာ္က MTU (Mandalay Technological University)/ IT Major/ 2nd year က Zaw Htet Naing ပါ။ က်ေနာ္ security ကို စိတ္ဝင္စားလို့ Creatigon ကို တက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းက သင္တာေတြထဲမွာ က်ေနာ္အားအရဆံုးက SQL Injection နဲ့ XSS ပါ။ အေျခခံ စာေတြ့ပိုင္းဆိုင္ရာကေနျပီးေတာ့ online ေပၚလက္ေတြ့ တက္စမ္းနိုင္တဲ့ အထိကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု သင္ေပးပါတယ္။ ကိုယ္က ဘယ္ query ေလးေတြ ထည္႕လိုက္ ရင္ source code ထဲ ဘယ္လိုျဖစ္သြားတယ္ဆိုတာ တြဲတြဲျပီးသင္ေပးပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ဗ်ာ သင္တန္းၿပီး လို့ ကိုယ္ advanced level ထိတက္ခ်င္တယ္ဆိုလည္း လြယ္သြားပါတယ္။ အေျခခံ ေကာင္းေကာင္းပါ သြားတာေပါ့ဗ်ာ။ ျပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ခုရွိေသးတယ္ ကိုယ့္ဘာကိုယ္ေလ့လာတာထက္ အခ်ိန္အမ်ားအမ်ားျကီးကို သက္သာပါတယ္။ သင္တန္းျပီးမွ ဒီထက္ပိုတတ္ခ်င္လို့ ထပ္ေလ့လာမယ္ဆိုလည္း အရင္လိုမဟုတ္ဘဲ ပိုျမန္လာပါတယ္။ XSS တို့ sqli တို့အျပင္ တျခား web security ပိုင္းနဲ့ ပတ္သက္တာေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ေလးစံုပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ေမးသမွ်ကိုလည္း စိတ္ရွည္ရွည္နဲ့ ေျဖေပးပါတယ္။ ကိုမင္းကိုကို တို့ ကိုယ္တိုင္အေျဖမသိရင္ေတာင္မွ ဒီတိုင္းပစ္မထားပါဘူး ေမးခြန္းမွတ္ထားျပီး အေျဖျပန္ရွာ ေပးပါတယ္။ web security လမ္းေျကာင္းလိုက္ခ်င္ရင္ Cratigon က ေတာ္ေတာ္အဆင္ေျပတဲ့ ပထမေျခလွမ္းပါ။
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်ကတော့ CREATIGON WEB SECURITY သင်တန်းသားပါ။ web security သင်တန်းဆိုပေမယ်လည်း တကယ်တန်း သင်ပေးသွားတာတွေက သင်တန်းတစ်ခုထက်မကပါဘူး။ web security ကို ကျွမ်းကျင်ချင်တဲ့ pentester ဖြစ်ချင်တဲ့ ညီငယ် ညီမငယ်တွေအတွက် လိုက်နာရမယ့် ethic တွေက အစ လမ်းပြသင်ပေးပါတယ်။ သင်ခန်းစာတွေကိုလဲ Theory ပိုင်းရော pratical ပိုင်းကိုပါ ကျွမ်းကျင်အောင် ko min ko ko ko နဲ့ thin ba shane တို့က စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ မရမချင်း မညီးမညူ ရှင်းပြပေးပါတယ်။ သင်ခန်းစာ တစ်ခုပြီးလို့ Lab တခုဖြေပြီးတိုင်း knowledge ရော concept တွေပါ တိုးတက်လာပါတယ်။ ဒီသင်တန်း တက်ပြီးသွားတာနဲ့ web security ပိုင်းမှာ အခြေခံတခုကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရသွားမှာပါ။ ရှေ့ဆက်လေ့လာရမယ့် နည်းပညာတွေအတွက်ပါ အထောက်အကူ ကောင်းကောင်းဖြစ်စေမှာပါ။
Kam Kham Sang
မင်္ဂလာပါ။ ကျနော်အနေနဲ့ #Creatigon မှ ညီကိုများ သင်ကြားပေးတဲ့ ဒီ #Cyber_Security_Training ဆိုတဲ့ သင်တန်းကို တက်ခဲ့ရတာကတော့ IT Security Field ကို စိတ်ဝင်စားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ IT Security Field များစွာထဲမှ ဒီသင်တန်းဟာ Web Security ပိုင်းကို အဓိထားပါတယ်။ ထိုကြောင့် Web Security အဖြစ် Client side attack များအပြင် Server side attack များရဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံနဲ့ Web vulnerability များကို သင်ယူရပါတယ်။ သင်ခန်းစာများကို သင်ယူတဲ့အခါ Theory ပိုင်းကော Pratical ပိုင်းပါ သင်ယူခွင့်ရပါတယ်။ သင်တန်းဆရာ (Ko Min Ko Ko နဲ့ Ko Thin Ba Shane) တို့မှ စိတ်ရှည်စွာဖြင့် နားလည်သည်အထိ သေချာရှင်းပြပါတယ်။ Theory ပိုင်းမှာ သေချာနားလည်သွားပြီဆိုလျင် Hands-on Practice အဖြစ် Local Network ထဲမှာ Lab လုပ်ရတာအပြင် live ဖြစ်နေတဲ့ Real Web Server များ၏ Vulnerability များအရ Penetrate လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများကိုလည်း ၄င်းတို့၏ အတွေ့အကြုံများဖြင့် သေချာရှင်းပြပြီး ကျနော်တို့ သင်တန်းသားတိုင်းလည်း လက်တွေ့ Penetrate လုပ်ကြရပါတယ်။ အဲ့တော့ ကျနော်အတွက် အကျိုးအမြတ် အများကြီးရရှိပါတယ်။ စာတွေနဲ့ လက်တွေ့ပူးတွဲပြီး သင်ယူခွင့်ရတဲ့အတွက် သင်ခန်းစာ တစ်ခုစီတိုင်းရဲ့ Concept များကို သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီသင်တန်းပြီးသွားတာနဲ့ Web Security ပိုင်းကို ကိုယ်တိုင် ဆက်လက်လုပ်နိုင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Ko Min Ko Ko, Ko Thin Ba Shane နဲ့ Creatigon ညီအစ်ကိုများအားလုံး။ လေစားစွာဖြင့် ကမ်ခန့်စန်
My Name is Myat Thu. I amaUIT student. I am studying Cyber Security. This class is very awesome. If you want to master about Web application security, you should take this course and if you want to haveasolid foundation of Cyber Security, i recommend this class because Creatigon guyws are very skillfuk. They are very patient and teach you until you really understand the lessons and concepts. They also share their knowledge and experience. So you can gain many lessons from them. The geeks als teach both Theory and Pratical. So, you are interested in Security fields but you have no idea about waht should you do, I advicethat you ought to take this class as fast as you can.The course can give you about CTF competition Knowledge. Enrolling this course is the first step of entering Web Application Security fields. When you finish this course, you can self-learn nwe technologies about Web Apps Security coz you've mastered the basics and concepts of security. So, Don't htestitate to register the class. They are waiting to teach you to becomeamaster in Securuty Fields. ping Min Ko Ko , Thin Ba Shane, Mg Sai Lay and Other Creatigon Brothers
This security class was my first step into Web Security field and it is really aewsome. Before I had decided to join this class. I was nervous just like "These guys seem really web security. If so, this class will be likeahell for me, my skill is just basic of web developing! gosh" but i bravely decided to join and I knew what I thought was wrong. They are very patient, I may have never seen guys patient like this and never hestitate to explain what the students asked for. After all this isavery good class.
I'm one of script kiddie xD. ကျနော် Creatigon နဲ့ မဆုံခင်က သာမန် script kiddie တစ်ယောက်ပါ။ script kiddie တစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ tools တွေနဲ့ သူများရဲ့ exploit တွေပေါ်မှာ မှီခိုတဲ့သူပါ တစ်ခါတလေ သူများပေးကမ်းတဲ့ zero days လေးတွေနဲ့ သောင်းကျန်းလို့ရပေမယ့်လဲ ကိုယ်တိုင်အားထုတ်မှု နည်းပါးလွန်းတယ်။ script kiddie အနေနဲ့ security ပိုင်းကို သေချာမလေ့လာနိုင်ပါဖူး။ Creatigon မှာက ခြေခံပိုင်းကို ပိုင်နိုင်အောင် လမ်းညွှန်ပေးပါတယ်။ security ပိုင်းကို သေချာလေ့လာပီး white hate or gray hat အဖြစ် လျောက်လှမ်းလိုတဲ့ သူတွေအတွက် အကျိုးရှိမဲ့ နေရာပါ။ တစ်ခုတော့ရှိတယ် ဟိုလိုဟက်ချင်တယ် ဒီလိုဟက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ နေရာမရှိပါဘူး။ အခုဆိုရင် ကျနော်တို့ဟာ security ပိုင်းမှာ ခရီးတစ်ခု ရောက်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါတွေက Creatigon ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုတွေပါ။ မိမိရဲ့ skill ကို စမ်းသပ်ချင်ရင် Creatigon ရဲ့ lab လေးတွေကိုဖြေဆိုပြီး မိမိအခြေအနေကိုလဲ သုံးသပ်နိုင်မှာပါ အားလုံးကျေးဇူးပါ။
Aye Htet Hein
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ကျနော် Creatigon မှာ Cyber Security သင်တန်းကို မတက်ခင်ကဆိုရင် ဘာမှရေရေရာရာ မသိပါဘူး နောက်ပိုင်းမှ Security ပိုင်းကို စိတ်ဝင်စားလာလို့ တက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းကို တက်ပြီးတော့မှ အခြေခံကအစ သိလာခဲ့ပါတယ်။ Web Security ပိုင်းကို အဓိကထားပါတယ်။ သင်တဲ့အခါမှာလဲ စာတွေ့နဲ့ လက်တွေ့ကို တခါတည်း ရှင်းပြပီး တွဲသင်ပါတယ်။ နားမလည်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို အစ်ကိုလိုလဲဖြစ် ဆရာလိုလဲဖြစ်တဲ့ အစ်ကို Min Ko Ko နဲ့ အစ်ကို Thin Ba Shane စိတ်ရှည်ရှည် နဲ့ သေသေချာချာ ရှင်းပြပေးပါတယ် Lab တေလဲ ဖြေရတဲ့အတွက် ကိုယ့် skill ကို စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Zan Ye Naing
ကျွန်တော်နာမည် ဈာန်ရဲနိုင်ပါ။ ခုလို Review လေး ရေးရလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။ Creatigon ဆိုတဲ့ နာမည်အတိုင်းပဲ Web Security ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Creative အပိုင်းတွေကိုနားလည် သဘောပေါက်လွယ်အောင် သင်ကြားပေးတဲ့ သင်တန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Web_Developing ပိုင်းကို ခုမှစလေ့လာလိုက်စားနေတဲ့ လူငယ်တွေ တက်ရောက်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး သင်တန်းဆိုရင်လည်း မမှားနိုင်ပါဘူး။ သင်တန်းမှာ Attack ပိုင်းကော Def ပိုင်းပါ မျှတမှုဖြစ်အောင် သင်ကြားပေးတဲ့အပြင် သင်တန်းက ဆရာတွေကလည်း တပည့်အပေါ် မိသားစုလို ဆက်ဆံသဘောထားတတ်တော့ နားမလည်တဲ့ စာတွေကိုပြန်မေးရာမှာလည်း ကြောက်လန့်မှုမရှိဘဲ လွယ်လွယ်ကူကူ ပြောနိုင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ Ko_root နဲ့ ကိုသင်းဗရှိန်း တို့ကလည်း Knowledge_Sharing ကိုလည်း အချိန်ရရင် ရသလို Share ပေးတဲ့အတွက်လည်း သင်တန်းကအစ်ကိုတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဒီစာထဲက ပြောလိုက်ပါရစေ။ စာတွေ့အပြင် လက်တွေ့အပိုင်းကို ဦးစားပေးလို့ အမှန်တစ်ကယ် နားလည်ပြီး သင်တန်းချိန်အတွင်းမှာပဲ သင်တန်းက ဆရာ အစ်ကိုတွေနဲ့အတူ တတ်မြောက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ပတ်တစ်ပတ် မရိုးနိုင်အောင် Cahllange တွေကို ကြိုးစားဖြေရင်း မိမိရဲ့ skill တွေကို improve နိုင်တာကတော့ တစ်ခြားသင်တန်းတွေနဲ့ မတူတဲ့ အားသာချက်တွေထဲမှာ ပါပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်တာကတော့ ဒီသင်တန်းဟာ Web_Security ပိုင်းသီးသန့် စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေအတွက်တင် မဟုတ်ပါဘူး Web_Developer ဘက်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူငယ်တိုင်း တက်သင့်တဲ့ သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနဲ့ သင်တန်းမှတစ်ဆင့် မိမိအလိုရှိရာ ပန်းတိုင်ကို ရယူနိုင်ကြောင်း ဒီ Rreview လေးနဲ့ပဲ သတင်းကောင်းပါး လိုက်ပါရစေဗျာ။
Linux Essential အတန်းကိုတက်မှ Linux ကို အတော်လေးနားလည်သွားပါတယ်။ အရင်က Linux ဆို အရမ်းကြောက်တာ ခုတော့အေးဆေးဖြစ်သွားပြီ System ပိုင်းတွေကိုလဲရှင်းပြပါတယ်။ အဲ့တာသင်လိုက်တာ တန်ပါတယ် Unix ပါရသွားပါတယ်။ Command line တွေက တူတူပါပဲ Directory လေးပဲမတူတာပါ။ Linux နဲ့ ခုသင်တန်းမပြီးသေးတာတောင် အတော်နားလည်နေပါပြီ။ သင်တန်းပြီးရင် Web Security တန်းကို တက်အုံးမှာပါ။ နားမလည်ရင်လဲ စောစောလာပြီး ဆရာကိုပြန်ရှင်းပြခိုင်းလို့ရပါတယ်။ ဆရာက စိတ်ရှည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုမသိရင် ဆယ်ခေါက်လောက်မေးပါတယ်။ သင်တန်းအချိန် ၂ နာရီပဲသင်တာက လွဲလို့ အကုန်ကောင်းပါတယ်။ Family type ဖြစ်တဲ့အတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သင်ရတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ Ko Myo Htun Aung, Thanks ပါ။
Gam Awng Lashi
ကျွန်တော်က Creatigon က Linux Essential ကျောင်းသားပါ။ အတန်းတောင် ဘာလိုလိုနဲ့ ပြီးသွားပြီပဲ။ ဆရာ ကိုမျိုး ကျေးဇူးပါ။ သူ့ဟာနဲ့သူ ဘယ် distro က ဘယ်အတွက် ဆိုတာတွေပေါ့။ ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်း အဆင်ပြေတာပေါ့ ဘယ်လမ်းကြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ဘယ် destro ရွေးဆိုတာတွေပေါ့။ Commands တွေကိုလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင် မငြီးမငွေ့ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သင်ကြားပေးတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူး။ Linux တစ်ခုတည်းသာမက အပြင် ဗဟုသုတ အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါ။ Pathway အကြောင်းလည်း ကောင်းကောင်းပြောပေးတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူး။ ပြောနေရင် ပြီးတော့မှာ မဟုတ်လို့ [email protected]4Lot.Creatigon လည်း ဒီထက်မက အောင်မြင်ပါစေ။ အခြား အတန်းအသစ်တွေလည်း ထပ်မံဖွင့်နိုင်ပါစေ။ ကိုမျိုး လည်း Forensic လေ့လာဖို့ ရှိတယ်ဆိုတော့ ထူးထူးချွန်ချွန် လေ့လာပြီးစီးနိုင်ပါစေ။ Forensic ပြီးရင်လည်း အားလုံးကို share ပေးနိုင်ပါစေ။ ဆိုလိုတာက Forensic အတန်းလည်း ဖွင့်နိုင်ပါစေ။ ကျေးဇူးပါ......။
အတော်ကောင်းတဲ့ သင်တန်းတစ်ခုပါ။ Basic ခိုင်မာအောင် သင်ပေးနိုင်ပြီး နောက်တစ်ဆင့် ကိုယ်သွားချင်သော လမ်းအတွက် အသိပညာ ဗဟုသုတပေး လမ်းညွန်ပြသပေးနိုင်တဲ့ သင်တန်းလေးပါ ခုလို လမ်းညွန်ပြသပေးခဲ့တဲ့ အတွက်လည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Wyne Chit Paing
ကျွန်တော် ဒီသင်တန်းမတက်ခင်က Linux နဲ့ ပတ်သင့်ပြီး ဘာမှမသိတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။Linux ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ facebook ကနေသိပြီး ဒီသင်တန်းကို တက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒီသင်တန်းတက်ပြီး Linux ရဲ့ history ကစ distro တွေပါသိရှိခဲ့ရပါတယ်။ဆရာကလည်း မသိတာဆို မေးသာမေး အကုန်သေချာရှင်းပြတယ်။ ဒီသင်တန်းက အရမ်းကောင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုရင် ဒီသင်တန်းတက်ပြီးကတည်းက GUI တောင်သိပ်မသုံးချင်တော့ပဲ စာရိုက်ရမှာ ပျင်းတဲ့ ကျွန်တော်က CLI ပဲသုံးချင်တော့တယ်။ပြီးတော့ အရမ်းအရမ်းလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ တခုသိရတာနဲ့အမျှ enter ခေါက်လို့အောင်မြင်တဲ့ အချိန်တိုင်း ပျော်ရတယ်။ဆရာကလည်း အရမ်းသဘောကောင်းပါတယ်။ သင်တန်းပြီးတော့ ဘယ်လမ်းတွေဘယ်လိုင်းတွေရှိတယ် ဘယ်လမ်းကတော့ ဘယ်လိုကောင်းတယ်ဆိုတာ လမ်းညွန် ပြသပေးတယ်။ အရမ်းအရမ်းကောင်ပါတယ်။ Creatigon အောင်မြင်တိုးတက်ပါစေသား တပည့်မှ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ မေ့လို့ တစ်ခုပြောရဦးမယ်.... ဆရာက စာမေးတယ် သိလား။ စာမေးပွဲ ဖြေရင်းခေါင်းတွေပူထူရတဲ့ အခိုက်အတန့်တော့ ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ အရမ်းကောင်းတဲ့ သင်တန်းလေးပါ။ ကျွန်တော် Linux ကို မသိခင်က Microsoft ကို ရူးခဲ့ဖူးတယ် ခု Linux ရဲ့ အခြေခံကိုသိတော့ ကျွန်တော့ရဲ့ ရူးသွပ်မှုက Linux မှာရောက်ခဲ့ပြီ။Creatigon လည်း ဒီ့ထက်မက တိုးတက်ပါစေ။ ဆရာနဲ့ တကွ Creatigon က အစ်ကိုများလည်း အောင်မြင်ကြပါစေ တပည့် ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
Zin Ko Thein
"Each module of the course was very well thought-out and designed to gain knowledge inavery effective way. "Myo Htun Aung wasavery helpful and patient lecturer. He providedalot of instructive, enlightening advice and information about IT-Security. His positive feedback never failed to encourage me and boost my confidence. When starting the Linux Essential class, I wasaneophyte with nothing butalove of hacking. Now i am enriched with valuable knowledge and much more confidence to support that passion."
ကျွန်တော်က Creatigon အဖွဲ့ကဖွင့်တဲ့ Linux Essential Training သင်တန်းသားတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော် Hacker တော့မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် Hacking ကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားသူ တစ်ယောက်ပါ။ ဒီသင်တန်းလေးက Linux ရဲ့ အဓိကဖြစ်တဲ့ installing နဲ့ command တွေကို သေသေချာချာ သင်ကြားပေးပါတယ်။ ဒီသင်တန်းမှာ ဆရာကတော့ ဆရာမျိုးထွန်းအောင် ပါ။ သူက ဒီသင်တန်းရဲ့ အကောင်းဆုံးအချက်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဆရာက ကျွန်တော်လို လူပိန်းကိုတောင် နားလည်လွယ်အောင် စိတ်ဝင်စားအောင် သင်ကြားပေးတယ်။ ဆရာကြောင့် ကျွန်တော်အခု Linux ဆိုတာကြီးကို ကလိခွင့်ရခဲ့ပြီ။ ဆရာကို မသိတာမေးရင် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ဖြေပေးတယ်။ ရည်မှန်းချက် ရှိသူတိုင်း ရှိသင့်တဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ပြောပြပေးတယ်။ ဆရာရဲ့ hard disk ကလဲ သင်တန်းသားတွေအတွက် အကောင်းဆုံး အရာတခုဆိုတာ ကျတော်အာမခံတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဆရာက ကြက်ဥကြော် ကြိုက်တယ်ထင်တယ်။ ဒီသင်တန်းကတော့ လူတိုင်း တက်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်။ Linux က Windows ထက်အားသာချက်ရှိတယ်။ ကွန်ပျူတာ ကိုင်တဲ့ လူတိုင်းတက်သင့်ပါတယ်။ Creatigon အဖွဲ့လဲ ဒီထက်အောင်မြင်ပြီး သင်တန်းတွေ ဆက်ဖွင့်နိုင်ပါစေ။ ဖွင့်ခဲ့ရင်လည်း ကျတော့ကို tag တွဲစေချင်ပါတယ်။ ဆရာနဲ့ သင်တန်းက အစ်ကိုတို့လည်း ဒီထက်မက ဗဟုသုတပိုကြွယ်ပြီး နောင်လူငယ်တို့ကို သင်ကြားပေးနိုင်ပါစေဗျာ။ ကျတော်လည်း စာသိပ်မစီတတ်တော့ ဒီလောက်ပါပဲဗျာ။
May Thi Bo
I've always wanted to know more about Linux as I have to use it at work. I was surprised by some great feaures of Linux used by my seniors. I found course outline on faceboob and I was interested. For me, This course is the first short step towards long self-learning of Linux. Ko Myo Aung is very patient by guiding us simple pathways through discussion. I've become familiar with commands and distros. For starters or ccareer changers, this course would be defintely helpful:)
Creatigon ရဲ့ Linux Essential သင်တန်းကို တက်ဖြစ်ပါတယ်။ Linux ဆိုတာ အရမ်းအခက်ကြီးမဟုတ်ဆိုတာ သိလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရမ်းလဲ မလွယ်ပါဘူး။ အရင်က Linux ဆို ဘာမှန်းမသိဘဲနဲ့ကို ကြောက်တာ၊ အခုတော့ အေးဆေးဖြစ်သွားတယ်။ ဆက်လေ့လာဖို့ပဲလိုပါတယ်။ System ပိုင်းတွေ Distro ပိုင်းတွေကို သေချာရှင်းပြပေးပါတယ်။ Commend line တွေက Windows နဲ့တူတာတွေလဲပါပါတယ်။ A+ ပိုင်းကို သေချာကြေညက်ထားတဲ့သူတွေ တက်ရင်ပိုပြီး လိုက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Security ပိုင်းမှာက Windows ထက်ပိုကောင်းပါတယ်။ lecture ရော pratical တွဲပြီးသင်တဲ့အတွက် ကောင်းပါတယ်။ Advanced Linux အတန်း ထပ်ဖွင့်ပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
Yan Aung Hein
ကျွန်တော်က tourism(NMDC) ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ Linux နဲ့ဘာဆိုင်လဲ ဆိုရင် ဆိုင်တော့ဆိုင်ကောင်းရဲ့။ ဒါပေမယ့် လူ ၁၀ဝ မှာ ၉၉ ယောက်ကတော့ ဘာမှမဆိုင်ဘူးပြောမှာပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပဲ တွေးတာပါ။ အာ့ဆို Creatigon မှာဘာလို့ Linux ကို သွားတက်တာလဲလို့မေးရင် စိတ်ဝင်စားလို့ကို တက်တာပါ။ ရှင်းရှင်းပဲ့။ (ငိငိ) အစက Linux ဆိုတာ နာမည်ဘဲကြားဖူးတာပါ သူ့အကြောင်းနည်းနည်းပါးပါးတော့ ကြားဖူးနားဝ ရှိတယ်ပေါ့လေ စစတက်ခြင်းကဆို ဆရာပြောတဲ့ အသုံးအနှုန်းဒေ တစ်ခုမှမသိ plain ရီး စိတ်တောင်ညစ်သွားတယ် (အစထဲကလည်းဘာမှ မသိတာ) ဒါပေမယ့်တက်ရင်းနဲ့ သွသူရင်းနှီးလာပြီး တက်ရတာပျော်လာတယ်။ ကိုမျိုးကလဲ သေချာသင်ပေတယ်။ hacking သဘောတရားတွေလည်း ကြုံရင်ကြုံသလိုလေး ပြောပြတယ်။ knowledge လည်းပေးတယ်။ ဆရာ ဆိုပြီတော့ ရုပ်တည်ကြီးနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး ပျော်ဖို့ကောင်းသလို ထိလည်းထိရောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း Creatigon မှာ ဆက်တက်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါသေးတယ်လိုု့ .........
Developing class Reviews
စာသင်တာလဲ စိတ်ရှည်တယ်။ သိချင်တာလဲ သေချာရှင်းပြပေးတယ်။ ယုံကြည်စွာ တက်ရောက်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကူညီပေးမဲ့ သူတွေလဲအများကြီးပါ။ သင်တန်းပြီးသွားတော့ ကိုယ့်မှာယုံကြည်ချက် ပိုရှိလာပါတယ်။ ပိုကြိုးစားရမယ် ပိုလေ့လာရမယ်လို့ တွေးမိလာတယ်။ #Web developer ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် Creatigon မှာတက်ရောက် သင်ယူရင်း အကောင်းဆုံးကြိုးစားလိုက် ကြပါစို့ (သင်တန်းလေးလဲ မှန်ပါစေနော်)။
စာသင်တာ ကောင်းတယ်။ သင်တန်းပြီးတဲ့အချိန် ဒီစာတွေကို အကုန်လုံးနားလည်သွားပြီး ဒီသင်တန်းတက်ခဲ့တာ မှန်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက် ကိုရတယ်။ သေချာဖိဖိစီးစီး သင်ပေးတယ်။ wifi လဲရတယ်။ ဘေးကဝိုင်းကြည့်ပေးတဲ့ အစ်ကိုတွေလဲရှိတယ်။ အချိန်မှန်မှန် လာဖို့တော့လိုတယ်။ မလာရင် ဖုန်းဆက်မေးတယ်။ PS: Web သင်တန်းတက်မယ် တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီး developer လုပ်မယ်ဆိုမှ လာခဲ့ပါ။
Achieved clear and short to the point teachings covering all popular front-end technologies necessary to immediately start writing real-world front-end projects in shorter time. A good front-end course worthy to attend and recommend to other.
Near Tarmwe Plaza.
164 Street,Tarmwe Township.
CONNECT TO CREATIGON